“Itoobiya ‘Somaliland marka La Aqoonsado Maku Wareejin Doontaa Dhulkii Ay U Haysay.? Sir Culus WQ-Hal-abuur Maxamed Galaydh. | Haqabtire News
“Itoobiya ‘Somaliland marka La Aqoonsado Maku Wareejin Doontaa Dhulkii Ay U Haysay.? Sir Culus WQ-Hal-abuur Maxamed Galaydh.
December 24, 2016 - Written by admin
1954kii markii uu ingriisku kula shiray,
Magaalada qabri-dahar beesha ogaadeen, wuxuu hor dhigay labo-qodob
Oo kala ahaa, ma waxaa Ku biiraysaan Somaliland? Mise itoobiya ayaa raacaysaan?
Falaqayn iyo dood badan kabacdi,
Ogaadeen waxay doorteen,inay ka mid noqdaan xukunkii itoobiya ee uu hogaaminaayay,xayla-salaase!
Deegaankii ay dagijireen beeshii isaaq ee ka qayb ahayd ,somalida galbeed waxaa loo bandhigay aragtiyihii ahaa,iyamaa raacaysaan labadaa qolo? Waxaanay doorteen Somaliland ,maadama oon wali aanay xoriyadii qaadan maxmiyaddii” gobolada waqooyi , waxaa dhulkoodii loogu yeedhay ,anbaba lagu magacaabay,riseef-,eeriya.
Macanaheeduna ahaa dhulkii kaydka.!
Waxaanuu ingiriisku beesha caalamka u sheegay, inay dhulkaa itoobiya sii haynayso intuu xoriyadda siinayo Somaliland kadibna uu Ku wareejin doona ,dadkii ay rabitaankooda Ku doorteen oo ahayd Somaliland .
Qodobadan laysku raacay ee ay itoobiya iyo beesha caalamku qaybta ka ahaayeen, waa mid hadda jira oo ay qaramada midoobay gacanta Ku hayso.
1961kii markii xoriyadda somiland LA siiyay may noqon inay goboladii LA wareegtee waxay LA midawday koonfurta oo uu talyaanigu haystay, si ay u wada baadi doonto mataanihi somalida ee shanta ka koobnaa.
Waxbaa yaan hadalka idinku daaline ,aan u galo obacda iyo ujeedadii qoraalkan.
Mar haddii dhulkaa Somaliland loo hayo oo adduunkuna ka war qabo, maalinta LA aqoonsado Somaliland malagu wareejin doonaa?
Suurta gal ma tahay sababta ugu wayn ee itoobiya madaxa ugaga taagantahay somalilanba inay tahay dhulkaa ay hore u saxeexday inay Ku wareejiso wakhtiga LA aqoonsado, inay ka cabsi qabto Somaliland inay dhulkii kala wareegto.?